Arzt - Malvorlagen für kider kostenlos
Ankizy sy ny tahotra ny avaratra
Betsaka ny olona matahotra mafy ny hahazo tsindrona. Ity tahotra ity dia miely indrindra amin'ny ankizy kely, ka ny fitsidihana ny dokotera dia mety ho andro mahasosotra indrindra ho an'ny ray aman-dreny raha sahirana amin'ny tanana sy tongotra ny zaza tsy hahazo ny tsindrona.
Ny tahotra fanindronana
Matahotra ny avaratra - sary nalain'i Angelo Esslinger amin'ny pixel
Ho an'ny ankizy maro, ny veromanitra dia tena nofy ratsy, ka izay amin'ny tranga sasany dia tsy mora ny mampitony ny zaza rehefa any amin'ny biraon'ny dokotera izy ireo ary mila tsindrona. Manampy be dia be matetika izany raha tsara amin'ny dokotera ny zaza ary mahalala tsara ny fomba hampitony ilay zaza.
Dokotera maro no manandrana manelingelina kely ny marary rehefa heverina fa misy tsindrona, satria fantatry ny mpitsabo mazava fa maro ny olona, ​​ary indrindra ny ankizy no matahotra tsindrona. "Ankizy sy ny tahotra ny tsindrona" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fampianarana, fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Matahotra tsindrona, dokotera, Fitsidihan'ny dokotera, syringe, SyringesLeave a Comment ho an'ny ankizy sy ny tahotra ny tsindrona